ချစ်သူရေ..... | ရွှေမင်းသား
Home » ၀တ္ထု » ချစ်သူရေ.....
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Saturday, July 21, 2007
ရွှေမင်းသား ရဲ့ ချစ်ပုံပြင်
စွဲလန်းတယ် ဆိုတာ..မေ့မရတဲ့ရောဂါ တစ်ခုလား? ဒါဆို မေ့တတ်တဲ့ ငါ့ရဲ့အကျင့်တွေကို
မြေမြှုပ် သဂြိုဟ် ပစ်လိုက်မယ်။
ခွဲခွာရမယ် ဆိုတာ အဆုံးသတ်ခြင်း တစ်ခုလား? ဒါဆို အသစ်တွေနဲ့ ပြန်ရှင်သန်ဖို့အတွက်
သိပ်လှတယ်ဆိုတာ အချစ် တစ်ခုကိုိုဖြစ်စေနိုင်မှာလား? ဒါဆို R-ဇာနည်ရဲ့ သီချင်းကိုငါ
ရွှေမင်းသား ဆိုတာ မင်းရင်ထဲမှာ တစ်ချိန်က မင်းရဲ့ ဘုရင်လေး ပါ။